आकाशवाणी (Aakashwani): बिचरा हाम्रा रैथाने कुकुरहरु !
बिचरा हाम्रा रैथाने कुकुरहरु !
अचेलका घरमा जर्मन शेफर्ड, बुल डग, अमेरिकन एस्किमो, अस्ट्रेलियन क्याटल डग आदी थुप्रै जातका बिदेशी कुकुरहरु पाल्ने फेशन चल्या छ । तर टोलका रक्षा गर्ने त आखिर रैथाने कुकुरहरु (अपमान गर्न 'भुस्याहा' भन्छन्) नै हुन् । जो सडकपेटीमा जन्मिन्छन् र सडकपेटीमै मर्छन् । थाहा छ ? यिनीहरुलाई तपाईं-हामीलाईभन्दा टोलको बारे बढी जानकारी हुन्छ । यिनले टोलका सबै मान्छे चिन्छन् । को नयाँ मान्छे - को पुरानो मान्छे यिन्लाई सबै थाहा हुन्छ । तर इन्लाई कसैले चिन्दैन । आज कता भतेर छ ? आज कता भेला छ ? इनिहरुलाई पहिले नै थाहा हुन्छ । अझ हाम्रा बुढापाकाले त यिनिहरुलाई टोल-छिमेकमा कसैको मृत्‍यु हुन लागेको छ भने पहिले थाहा हुन्छ रे भन्नुहुन्छ । यिनीहरुको घ्राणशक्ती (सुँघ्ने शक्ती) मान्छेहरुको भन्दा बढी छ, त्यसैले यिनिहरुले मृत्‍युको गन्ध पनि चाल पाउँदा हुन् । शायद तपाईंले पनि सुन्नु भा'को छ होला, त्यस्बेला यिनिहरु नराम्रोसँग रुन्छन् । अचम्मको शक्ती छ हाम्रा रैथाने कुकुरहरुमा !
भोक-भोकै हुन्छन् तर पनि टोलमा चोर पस्यो भने ठुलो हो-हल्ला गरेर टोलबासीलाई सचेत गराउँछन् यिनिहरु ! तपाईंले कहिले यिनलाई एक पुरिया बिस्कुट दिनु भा'को छ ? दिएर हेर्नुस् त; यिनीहरु कती खुशी हुन्छन् । भोलीदेखी तपाईं टोलमा पस्ने बित्तिकै यिनिहरु हर्श-भिभोर हुन्छन् । पुच्छर हलाउँदै आईपुग्छन् स्वागतार्थ ।
हामीले कहिले यिन्को कदर गरेनौं । तर यिन्ले हाम्रो जहिले नि कदर गर्छन् । यिनीहरु पेटभर्न तपाईं हामी जस्तो देश-बिदेश चाहर्दैनन् । बरु भोकै सुत्छन् तर अर्को टोलसम्म पनि जाँदैनन् । अनेक ताडना र लात सहँदै भए पनि यिनिहरु आफ्नो टोल छोड्दैनन् । यो हो वास्तवमा असली र सच्चा टोल प्रेम !
बिडम्बना नै मान्नु पर्छ, हाम्रै टोलमा बिनाशुल्क यती समर्पित र स्वामीभक्त कुकुर हुँदा-हुँदै पनि कथित आधुनिकहरुले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर बिदेशी कुकुरहरु मगाउँछन् । 'पेडिग्री' (कुकुरको लागि बनाइएको स्पेशल बिदेशी खाना) भोजन गराउँछन् । गगल्स, सुइटर र टाइ भिराइदिन्छन् । त्यस्का लागि स्पेसल साबुनले नुहाइदिन्छन् । कतिले त एउटा मान्छे (नोकर) नै पनि राखेका हुन्छन् बिदेशी कुकुरको आची सोहोर्न र चाकर गर्न । त्यस्को गालामा म्वाइ खानु, तस्बिर घरमा सजाउनु र सोसल मिडियामा फोटो र भिडियो पोस्ट गर्नु त सामान्य नै भयो । तर केही नेपाली सेलिब्रेटीहरुले त अचेल युरोपियन र अमेरिकिको देखासिकी महँगो बिदेशी कुकुर लिएर पार्टीमा 'शो' गर्न समेत जानथालेका छन् ।
यि बिदेशी कुकुरप्रेमीहरुको अर्को नाटक बुझी नसक्नुको छ; यिनीहरु मर्निङवाक वा इभिनिङवाकको नाममा बिदेशी कुकुर देखाउँदै हिंड्छन् । अनी हाम्रा लोकल/रैथाने कुकुरले भुके भने लट्ठीले मर्ने गरी हिर्काउँछन् वा लात्तले बजार्छन् । असाद्धै टिठ लागेर आउँछ । कठै बिचरा हाम्रा रैथाने कुकुरहरु !
- योगेश कुमार खपाङ्गी
Labels: Local Dog, Nepali Dog, Note, रैथाने कुकुर
खेल, जात्रा, मनोरन्जन र देश
चर्चित नेपाली अनुहारहरु
मंगलमय शुभकामना !
स्वाइन-फ्लु, बर्ड-फ्लु र ह्युमन फ्लु !
नेपाली भाषामा नै विन्डोज ८
जय देश - जय किसान !
व्यङ्ग्य : पाखे भर्सेज मोर्डन
जिद्दीको अगाडी दैवले पनि हार्छ
धनीको खेल क्रिकेट, गरीबको खेल डन्डीबियो
गाँठ भी गँवाना, बेवकुफ भी बनना !